Nahoana i Jesosy no tsy maintsy maty? | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Nahavokatra be ny asan'i Jesosy. Nampianatra izy ary nanasitrana an'arivony. Nahita mpihaino be dia be izy ary mety nisy fiantraikany lehibe kokoa. Afaka nahasitrana an'arivony maro kokoa izy raha nankany amin'ny Jiosy sy ny tsy Jiosy izay nonina tany amin'ny faritra hafa. Fa i Jesosy namela ny asany tsy ho ela. Afaka nisoroka ny fisamborana izy, fa nisafidy ny ho faty fa tsy nanaparitaka ny fitoriany teny amin'izao tontolo izao. Ny fampianarany dia zava-dehibe, fa tsy tonga mba hampianatra ihany koa izy fa ho faty koa, ary tamin'ny fahafatesany dia nanao zavatra betsaka kokoa noho ny teo amin'ny fiainany Izy. Ny fahafatesana no ampahany lehibe indrindra tamin'ny asan'i Jesosy. Rehefa mieritreritra an'i Jesoa isika dia mieritreritra ny hazo fijaliana ho tandindon'ny Kristianisma, amin'ny mofo sy divain'ny sakramenta. Mpanavotra antsika izay maty.
Ny Testamenta Taloha dia milaza amintsika fa niseho matetika tamin'ny endrika olombelona Andriamanitra. Raha mba te-hanasitrana sy hampianatra i Jesosy, dia afaka "niseho" fotsiny. Saingy nanao zavatra bebe kokoa: lasa olombelona izy. Nahoana? Ka afaka maty izy. Mba hahatakatra an'i Jesosy dia mila mahatakatra ny fahafatesany isika. Ny fahafatesany dia ampahany lehibe amin'ny hafatry ny famonjena sy zavatra mahakasika ny kristiana rehetra mivantana.
Nilaza i Jesosy fa "ny Zanak'olona tsy tonga mba hotompoina, fa hanompo izy ary hanome ny fiainany hahazoana famonjena [ny Baiboly be dia be sy ny Elberfeld Bible: ho fanavotana] ho an'ny maro" Matth. 20,28) Tonga hamono ny ainy mba ho faty izy; ny «fahafatesany» dia tokony hividy "famonjena" ho an'ny hafa. Io no antony lehibe nahatonga azy ho tonga eto an-tany. Ny rany dia natokana ho an'ny hafa.
Jesosy dia nanambara ny fahoriany sy ny fahafatesany tamin'ny mpianatra, nefa toa tsy nino azy ireo izy. "Hatramin'izay dia nanomboka naneho tamin'ny mpianatra ny fomba hankany Jerosalema i Jesoa ary hijaly be amin'ny loholona sy ny mpisoronabe ary ny mpanora-dalàna ary hovonoina sy hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary i Petera nampandeha azy ka natombony hoe: Andriamanitra ô, vonjeo, Tompo ô! Tsy azonao fotsiny izany! » (Matio 16,21-22.)
Fantatr'i Jesosy fa tsy maintsy ho faty izy satria voasoratra toy izao. "... Ary ahoana no nanoratan'ny Zanak'olona fa hijaly be sy hatao tsinontsinona izy?" (Marka 9,12; 9,31; 10,33-34.) «Ary nanomboka tamin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ary nanazava taminy izay nolazaina momba azy ao amin'ny soratra masina rehetra ... Koa voasoratra fa Kristy dia hijaly ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo » (Lioka 24,27:46 sy).
Ny zava-drehetra dia araka ny drafitr'Andriamanitra: Heroda sy Pilato ihany no nanao ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra sy ny fanapahan-kevitr'izy ireo "tokony hitranga" (Asan’ny Apostoly 4,28). Tao amin'ny zaridainan'i Getsemane dia nivavaka izy raha tsy nisy fomba hafa; tsy nisy (Lioka 22,42). Ny fahafatesany dia ilaina amin'ny famonjena antsika.
Ilay mpanompo mijaly
Taiza no nanoratana azy? Ny faminaniana mazava indrindra dia azo jerena ao amin'ny Isaia 53. I Jesosy mihitsy no nanonona ny Isaia 53,12 hoe: "Fa lazaiko aminareo: Ny zavatra tsy maintsy tanterahina amiko dia tsy maintsy ho voasoratra hoe: 'Voatanisa ho isan'ny mpanao ratsy izy.' Satria izay voasoratro no ho tanteraka » (Lioka 22,37). Jesosy, tsy nanota dia tokony ho isan'ireo mpanota.
Inona koa no voasoratra ao amin'ny Isaia 53? "Eny tokoa, nitondra ny aretintsika Izy ary nanebaka antsika tamin'ny fanaintainany. Nihevitra izahay fa izy no ilay voaroba sy nokapohin’Andriamanitra sy nampijalian’Andriamanitra. Nefa izy dia naratra noho ny helotsika [fivadiham-pinoana, fivadiham-pinoana] ary potika noho ny fahotantsika. Ny sazy mihatra aminy ho amin'ny fandriam-pahalemana, ary amin'ny ratrany dia sitrana isika. Samy nivily toy ny ondry isika rehetra, samy nijery ny lalany. Fa ny Tompo nandatsaka ny fahotantsika rehetra taminy » (Andininy 4-6).
Izy dia "voan'ny vokatry ny heloky ny oloko ... na dia tsy nanao ratsy aza ... Te hamono azy amin'ny aretina ny Tompo. Rehefa nanolotra ny fiainany ho niharan'ny fanamelohana izy ... dia nitondra ny fahotany ... nitondra ny fahotan'ny maro ... ary nivavaka ho an'ireo mpanao ratsy » (Andininy 8-12). Isaia dia mampiseho ny olona iray tsy hijaly noho ny fahotan'ny hafa, fa noho ny fahotan'ny hafa.
Ity olona ity dia tokony "hofongorana amin'ny tanin'ny velona" (Andininy 8), saingy tsy izany no farany amin'ny tantara. Tokony “hahita ny mazava izy ary hanana be dia be. Ary amin'ny alàlan'ny fahalalany dia hamorona fahamarinana ho an'ny maro ny mpanompoko, ilay olo-marina ... hiteraka izy ary ho ela velona » (Andininy 11 sy 10).
Izay nosoratan'i Isaia, dia notanterahin'i Jesosy. Natolony ho an'ny ondriny ny ainy (Jaona 10:15). Tamin'ny fahafatesany dia nanaiky ny fahotantsika izy ary nijaly noho ny fandikantsika; voasazy izy, mba hananantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny fijaliany sy ny fahafatesany dia sitrana ny aretin'ny fanahintsika; hamarinina isika - nesorina ny fahotantsika. Ireo fahamarinana ireo dia mivelatra sy mihalehibe ao amin'ny Testamenta Vaovao.
Fahafatesana mahamenatra sy mahamenatra
Ny "lehilahy nahantona dia voaozona amin'Andriamanitra", hoy ny Deoteronomia 5:21,23. Noho io andininy io dia nahita ny fanozonan'Andriamanitra tamin'ny hazo fijaliana rehetra ny Jiosy ary, araka ny nosoratan'i Isaia, dia nahita azy io "nokapohin'Andriamanitra". Nieritreritra angamba ny pretra jiosy fa hampatahotra sy hahalemy ny mpianatr'i Jesosy izany. Raha ny marina dia nanimba ny fanantenan'izy ireo ny hazo fijaliana. Niaiky izy ireo fa niaiky: "Nanantena izahay fa Izy no hanavotra ny Isiraely" (Lioka 24,21). Avy eo dia namerina ny fanantenany ny fitsanganana amin'ny maty, ary ny fahagagan'ny Pentekotista dia nameno herim-po vaovao hambara ho mpamonjy fa ny mahery fo izay, araka ny finoana fanta-daza, dia mahery fo mahery iray: Mesia nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana.
"Andriamanitry ny razantsika", hoy i Peter talohan'ny filankevitra avo, "dia nanangana an'i Jesosy, ilay nahantonanareo teo ambonin'ny hazo, ka novonoina" (Asan’ny Apostoly 5,30). Ao amin'ny "Holz" i Peter dia mahamenatra tanteraka ny fahafatesan'ny lakroa. Ny mahamenatra, hoy izy, dia tsy mandainga amin'i Jesosy - eo amin'ireo izay nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana. Notahin'Andriamanitra izy, satria tsy mendrika ny ozona izay niaretany. Andriamanitra no namadika ny stigma.
Nilaza ny fanoherana iray ihany i Paoly ao amin'ny Galatiana 3,13: «Fa i Kristy kosa dia nanafaka antsika tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga ozona ho antsika io; satria voasoratra hoe: 'Voaozona izay rehetra mihantona eo ambonin' ny hazo '... »Jesosy dia tonga ozona ho solontsika fa tsy ho afaka amin'ny ozon'ny lalàna. Lasa zavatra izay tsy izy izy, mba ho lasa zavatra tsy eo isika. "Fa Izy nanao izay tsy nahalala ota ho ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra isika" (2 Kor.
Jesosy dia tonga ota noho ny amintsika ka ahafahantsika manambara azy marina. Satria nijaly izay mendrika azy isika, dia nanafaka antsika tamin'ny ozona - tamin'ny sazy - ny lalàna. "Ny sazy mihatra aminy amin'ny fiadanany." Noho izy nanasazy ny sazy, dia afaka mahazo fihavanana miaraka amin'Andriamanitra isika.
Ny teny avy any amin'ny hazo fijaliana
Tsy hadinon'ireo mpianatra ny fomba mahamenatra nataon'i Jesosy. Indraindray aza dia izy no nampifantoka ny fitoriany: "... fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo, fanelingelenana amin'ny Jiosy ary hadalana amin'ny Grika" (1 Kor. 1,23). I Paoly aza aza miantso ny filazantsara hoe "tenin'ny hazo fijaliana" (Andininy 18). Nilaza tamin'ny Galatianina izy ireo fa nanjary tsy nahita ny endrik'i Kristy marina izy ireo: "Iza no efa nanendry anao, izay nohosorana an'i Jesosy Kristy teo imason'ny masony teo amin'ny hazo fijaliana?" (Gal. 3,1.) Izany no hafatra fototry ny filazantsara.
Nahoana ny lakroa "filazantsara", vaovao mahafaly? Satria navotana teo amin'ny hazo fijaliana isika ary nomena ny sazin'izy ireo ny fahotantsika. Nifantoka tamin'ny hazo fijaliana i Paoly satria io no lakilen'ny famonjena antsika amin'ny alàlan'i Jesoa.
Tsy hatsangana amin'ny voninahitra isika raha tsy efa voaloa ny trosa mpanota, rehefa nohamarinina tao amin'i Kristy ho "talohan'ny Andriamanitra isika". Amin'izay ihany isika vao afaka miditra amin'ny voninahitr'i Jesosy.
"Ho antsika" dia maty i Jesosy, hoy i Paul (Romana 5,6: 8-2; 5 Korintiana 14:1; 5,10 Tes.); ary "noho ny fahotantsika" dia maty izy (1 Kor. 15,3; Gal. 1,4). "Nataony niakatra avy any amin'ny hazo ny fahotantsika". (1. Pet. 2,24; 3,18). Nilaza koa i Paoly fa niara-maty tamin'i Kristy isika (Rom. 6,3-8). Rehefa mino azy isika dia mizara ny fahafatesany.
Raha manaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy antsika isika, dia toa antsika ny fahafatesany; Ny fahotantsika dia natao ho azy ihany, ary ny fahafatesany dia mandoa ny sazin'ireo ota ireo. Toy ny hoe nanantona teo amin'ny hazo fijaliana isika, toy ny hoe nahazo ny ozona izay nentin'ny fahotantsika. Nefa nataony ho antsika izany, ary noho izy nanatanteraka izany, dia azontsika atao ny manamarina, izany no heverina ho rariny. Mitondra ny fahotantsika sy ny fahafatesantsika Izy; omeny rariny sy fiainana isika. Nanjary mpangataka zazalahy ny printsy ka lasa mety lasa pretra izahay.
Milaza ny Baiboly fa avotra Jesosy (raha ny amin'ny fanavotana taloha: famotsorana, mividiana maimaimpoana) ho antsika, fa ny vidim-panavotana dia tsy naterina tany amina sampana manokana - fehezanteny an'ohatra izany izay te hamoahana azy fa vidiny lafo be izy io. , "Novidim-bola be ianao," hoy i Paul mamaritra ny fanavotana antsika amin'ny alalan'i Jesosy: ity koa andian-teny an'ohatra io. I Jesosy dia "nividy" ho antsika, fa "tsy nandoa" akory.
Ny sasany nilaza fa maty i Jesosy mba hanome fahafaham-po ny zon'ny ray - saingy afaka milaza koa ianao fa ny ray no nandoa ny vidiny tamin'ny fandefasana sy hanome ny zanany lahitokana ho azy. (Jaona 3,16:5,8; Romana). Ao amin'i Kristy Andriamanitra dia nanasazy, ka tsy mila izany isika; «Satria amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tokony hanandrana ny fahafatesana ho an'ny rehetra» (Heb. 2,9).
Mandosira ny hatezeran'Andriamanitra
Tian'Andriamanitra ny olona - saingy halany ny ota satria manimba olona. Noho izany dia hisy “Andro fahatezerana” rehefa hitsara an'izao tontolo izao Andriamanitra (Rom 1,18; 2,5).
Izay mandà ny marina dia ho voasazy (2, 8). Na iza na iza mandà ny fahamarinan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia hahalala ny faharatsian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra hibebaka ny tsirairay (2. Pet. 3,9), fa izay tsy mibebaka dia hahatsapa ny vokatry ny fahotany.
Voavela ny fahafatesan'i Jesosy ary manala ny fahatezeran'Andriamanitra, ny sazin'ny ota. Na izany aza, tsy midika akory izany fa Jesosy be fitiavana dia nampifaly an'Andriamanitra tezitra na, amin'ny heviny, "nivarotra mangingina". Jesosy dia tezitra amin'ny fahotana toa ny ray. Tsy Jesosy irery no mpitsara an'izao tontolo izao izay tia ny mpanota ka mamela ny ota ho azy ireo, fa izy ihany koa no mpitsara an'izao tontolo izao izay manameloka (Mat. 25,31-46).
Rehefa mamela antsika Andriamanitra dia tsy manasa ny ota fotsiny izy ary mody ho tsy misy intsony. Mandritra ny Testamenta Vaovao, dia mampianatra antsika izy fa ny ota dia resin'ny fahafatesan'i Jesosy. Misy voka-dratsy lehibe ny ota - vokatr'izay hitantsika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Nanary ny fanaintainana sy ny fahafaham-baraka ary ny fahafatesana i Jesosy. Niharan'ny famaizana tokony homena azy isika.
Mampiharihary ny filazantsara fa Andriamanitra dia manao ny marina rehefa mamela antsika isika (Rom. 1,17). Tsy ambanin-javatra ny fahotantsika, fa resiny ao amin'i Jesosy Kristy. "Andriamanitra no nanao azy ho amin'ny finoana ho avotra amin'ny rany hanaporofo ny fahamarinany ..." (Romana 3,25). Ny hazo fijaliana dia mampiseho fa marina Andriamanitra; dia mampiseho fa lehibe loatra ny ota ka tsy raharahina. Mety tsara ny hanasaziana ny ota, ary nanaiky an-tsitrapo ny sazinay i Jesosy. Ankoatry ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, ny hazo fijaliana koa dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra (Rom. 5,8).
Araka ny nambaran’i Isaia: mihavana amin’Andriamanitra isika satria voaheloka i Kristy. Mbola lavitra an'Andriamanitra isika, fa efa nanatona azy tamin'ny alàlan'i Kristy (Efes. 2,13). Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mihavana amin'Andriamanitra isika amin'ny alàlan'ny hazofijaliana (Andininy 16). Finoana kristiana fototra fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia miankina amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy.
Fivavahana Kristianisma: ity dia tsy lisitr'ireo fitsipika misy. Ny kristianisma dia ny finoana fa Kristy dia nanao izay rehetra mila ataontsika amin'Andriamanitra - ary nataony teo amin'ny hazo fijaliana Izy. “Nihavana tamin’Andriamanitra ... tamin’ny fahafatesan’ny zanany lahy, fony isika mbola fahavalony” (Rom. 5,10). Tamin'ny alàlan'i Kristy dia nampihavanin'Andriamanitra izao rehetra izao "tamin'ny alalan'ny fihavanana tamin'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana" (Kol. 1,20). Raha mihavana isika amin'ny alalany, dia voavela ny ota rehetra (Andininy 22) - Ny fampihavanana, ny famelan-keloka ary ny fahamarinana dia samy iray sy mitovy ny zavatra iray: fihavanana amin'Andriamanitra.
Nampiasa sary mahaliana ho an'ny famonjena i Paoly rehefa nanoratra izy fa "nesorin'i Jesosy ny hery sy ny fahefany ary nasehony ampahibemaso izany ary nahatonga azy ireo handresy ao amin'i Kristy [a. Through .: amin'ny alàlan'ny hazo fijaliana] » (Kol. 2,15). Mampiasa ny sarin'ny diarin'ny miaramila izy: ny jeneraly mandresy dia mampiseho ireo voafonja fahavalo amin'ny filaharana mandresy. Masiaka izy ireo, mahamenatra, aseho. Ny tian'i Paoly ambara eto dia ny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany izany.
Ny toa ny fahafatesan'ny fahafaham-baraka dia tena fandresena ho an'ny drafitr'Andriamanitra, satria tamin'ny alàlan'ny hazo fijaliana no nandresen'i Jesosy ny hery feno fankahalana, tamin'i Satana, ny ota ary ny fahafatesana. Afa-po tanteraka ny filazanao ny momba anay ny fahafatesan'ilay niharam-boina tsy manan-tsiny. Tsy afaka mangataka mihoatra noho ny efa voaloa ilay izy. Tamin'ny alàlan'ny fahafatesany dia nilazana isika fa nalain'i Jesosy ny fahefana avy amin'ny "nanana fahefana tamin'ny fahafatesana, dia ny devoly" (Heb. 2,14). «... Ilay Zanak'Andriamanitra dia niseho mba handrava ny asan'ny devoly» (1 Jaona 3,8). Nandresy teo amin’ny hazo fijaliana ny fandresena.
Ny fahafatesan'i Jesôsy dia voalaza ihany koa fa lasibatra. Ny fiheverana ny fahafoizan-tena dia avy amin'ny lovam-pahalalana betsaka amin'ny sorona ao amin'ny Testamenta Taloha. Niantso ny Mpamorona antsika ho "iharan'ny fanamelohana" (53,10). Jaona Mpanao Batisa niantso azy hoe "zanak'ondrin'Andriamanitra izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao" (Jaona 1,29). I Paoly dia naneho azy ho toy ny niharam-pihavanana, niharan'ny ota, tahaka ny zanak'ondrin'ny Paska, ho fanatitra dorana (Rom. 3,25; 8,3; 1 Kor. 5,7; Efes 5,2). Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia miantso azy ho fanatitra noho ny ota (10,12). Jaona dia miantso azy ho sorona fampihavanana "noho ny fahotantsika" (1 Jaona 2,2; 4,10).
Maromaro ny anarana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao tsirairay dia mampiasa teny sy sary samihafa momba izany. Ny tena fitenenana ny teny, ny mekanika marina dia tsy mamaritra mazava. Ny eto ambany dia hoe voavonjy amin'ny fahafatesan'i Jesosy isika fa ny fahafatesany ihany no manokatra famonjena ho antsika. "Ny ratrany no nanasitrana antsika." Maty Izy mba hanafaka antsika, hanavotra ny fahotantsika, hijaly ny sazintsika ary hividy ny famonjena antsika. «Ry malala, raha nitia antsika Andriamanitra dia tokony hifankatia koa isika» (1 Jaona 4,11).
Fahatongavana famonjena: fehezan-teny fototra fito
Ny haren'ny asan'i Kristy dia aseho ao amin'ny Testamenta Vaovao amin'ny alàlan'ny sary isan-karazany amin'ny fiteny. Azontsika antsoina ireo fanoharana ireo sary, modely, metafora. Ny tsirairay dia manaingo ny ampahany amin'ny sary:
vidim-panavotana (saiky mifangaro amin'ny "fanavotana"): vidiny aloa hanafaka ny olona iray. Mifantoka amin'ny hevitry ny fanafahana ny ifantohana fa tsy ny toetoetran'ny vidiny.
Fanavotana: raha ny hevitry ny teny tany am-boalohany dia miorina amin'ny "fivarotana", B. ny fividianana andevo maimaimpoana.
Fanamarinana: mijoro tsy meloka eo anatrehan'Andriamanitra, toy ny famotsorana amin'ny fitsarana.
fanavotana (Ny famonjena): Ny hevitra fototra dia ny fanafahana na famonjena amin'ny toe-javatra mampidi-doza. Misy ihany koa ny fanasitranana, fanasitranana, fiverenana amin'ny fahatsapan-tena.
Fampihavanana: famerenana indray ny fisarahana fifandraisana tapaka. Andriamanitra mampihavana antsika aminny tenany. Miasa amin'ny famerenany ny fisakaizana izy ary mandray ny fandraisana andraikitra ataontsika isika.
Ankizy: Lasa zanak'Andriamanitra ara-dalàna isika. Ny finoana dia mitondra fiovan'ny toetran'ny mpivady: avy amin'ny olon-kafa mankany amin'ny fianakaviany.
Famelan-keloka: azo jerena roa. Amin'ny lafiny ara-dalàna, ny famelan-keloka dia midika hoe fanafoanana trosa. Ny famelan-keloka eo amin'ny interpersonal dia midika hoe mamela heloka manokana (araka ny Alister McGrath, Fahafantarana an'i Jesosy, p. 124-135).